भएन साझा मञ्चको बैठक, गरिएन उम्मेदवारको घोषणा : गोरामुमोले के देखायो त यसको कारण? - खबरम्यागजिन
Homeखबरभएन साझा मञ्चको बैठक, गरिएन उम्मेदवारको घोषणा : गोरामुमोले के देखायो त यसको कारण?
विनय-अनित-अमरको इन्डिभिजुवल प्राइबेट लिमिटेडलाई हराएन भने गद्दार भूमिपुत्रले मुद्दा भूमिभित्र गाड्नेछन्-जिम्बा
‘आरबी राई तीनपल्ट विधानसभा पुगेका हुन्। रज्यसभामा दुइपल्ट पुगेका हुन्। लोकसभामा एकपल्ट। यति पुग्दा पनि तिनले पहाडलाई दिएको एउटा काठे पिरासमेत छैन। एउटा चिज बताइदेवोस् आरबी राईले पहाडको निम्ति के दिए?,’ जिम्बाले भने, ‘आरबी राईले गणतन्त्रको लागि एउटा बैठक बोलाए तर हतारहतार 10 मोर्चाको दिन आफ्नो उम्मेद्वारिता घोषणा गरे। यसै कारण सबै कुरा बिग्रियो। यद्धपि, गोरामुमोले विनय-अनित- अमरजस्ता जातिका गद्दारहरूलाई हराउन कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन। राम्रो उम्मेदवार दिइनेछ।’
साझा मञ्चभित्रको द्वन्द्वको कारण आज उम्मेदवार घोषणा गर्न सकेन। राजनैतिक कारण र पार्टीहरूको आफ्नै समस्याको कारण बैठक हुन नसकेको गोरामुमोका निरज जिम्बाले बताएका छन्। यद्धपि, गोरामुमोले भने स्टेरिङ कमिटीले बैठक गरेर साझा मञ्चबाट उम्मेदवार दिन नसकेको वा बैठक हुन नसकेको कारणबारे चर्चा गरेको बताए।
‘बैठक हुन नसक्नु र उम्मेदवार घोषणा गर्न नसक्नुको मुख्य काऱण क्रामाकपाले अघिबाट नै आरबी राईलाई उम्मेदवार घोषणा गर्नु र हर्कबहादुर छेत्रीले साझा मञ्च र चुनावी दौडबाट निस्किनु हो,’ उनले भने, ‘यद्धपि साझा सहमतिमा उम्मेदवार ल्याउन गोरामुमोले अन्तिम साससम्म प्रयास गर्नेछ।’
उनले साझा मञ्चले बैठक गर्न नसक्नुमा पार्टीहरूले हतारहतार अघि सारेको स्वार्थ रहेको जिम्बाले स्पष्ट पारेका छन्।
‘आरबी राई तीनपल्ट विधानसभा पुगेका हुन्। रज्यसभामा दुइपल्ट पुगेका हुन्। लोकसभामा एकपल्ट। यति पुग्दा पनि तिनले पहाडलाई दिएको एउटा काठे पिरासमेत छैन। एउटा चिज बताइदेवोस् आरबी राईले पहाडको निम्ति के दियो?,’ जिम्बाले भने, ‘आरबी राईले गणतन्त्रको लागि एउटा बैठक बोलाए तर हतारहतार 10 मोर्चाको दिन आफ्नो उम्मेद्वारिता घोषणा गरे। यसै कारण सबै कुरा बिग्रियो। यद्धपि, गोरामुमोले विनय-अनित- अमरजस्ता जातिका गद्दारहरूलाई हराउन कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन। राम्रो उम्मेदवार दिइनेछ।’
आफूहरूको हातमा आठ दिन रहेको र यसैबीच कुनै राजनैतिक विकास हुनसक्ने बताउँदै उनले भने, ‘विनय-अनित-अमरको इन्डिभिजुवल प्राइबेट लिमिटेडलाई हराउन हामी यमराजसित हात मिलाउन परे पनि मिलाउनेछौं। पहाडको सबैभन्दा ठूलो भूमिका हो विनयहरूलाई हराउनु। गोर्खाहरूले नै उनीहरूलाई हराउनुपर्छ। हराएन भने गद्दार भूमिपुत्रले मुद्दा भूमिभित्र गाड्नेछन्। बरू भारतीय भूमिपुत्र होस् उम्मेदवार तर जयचन्द, गद्दार भूमिपुत्र नहोस्।’
जिम्बाअनुसार गोरामुमोले अन्तिम समयसम्म यस्तो उम्मेदवार ल्याउने प्रयास गर्ने छ, जसले विनयको उम्मेदवारलाई जमानत जफत गराउनेछ। उनले गोरामुमोले अहिले पार्टीस्वार्थ भन्दा जातिस्वार्थमा प्रतिबद्ध रहेको अनि छैटौं अनुसूची आफ्नो दलको मूख्य मुद्दा भए पनि लोकसभा चुनाउ भनेको गद्दारहरूलाई हराउने चुनाउ रहेको पनि उनले बताए।
‘यसपालिको चुनाउ मुद्दा बचाउने चुनाउ हो,’ उनले भने, ‘यसबेला कुनै पनि दलले पार्टीको स्वार्थ हेर्नु हुँदैन। जातिको स्वार्थ हेर्नुपर्छ।’